जिबी रोडको कोठा नम्बर ५० मा बस्ने २४ वर्षीया युवतीको कथा « Etajakhabar
जिबी रोडको कोठा नम्बर ५० मा बस्ने २४ वर्षीया युवतीको कथा
नयाँ दिल्ली :
राजधानी दिल्लीको जीबी रोडको सडक छोडेर एक युवतीले नयाँ जीवन सुरु गर्न लागेकी छिन् । यो केटी को हो? के गर्छ जीबी रोडको कोठा नम्बर ५० बाट कसरी झुटकारा आयो भन्ने पछि बताउनेछौँ । कर्नाटककी यी युवती आखिर कसरी दिल्लीको जीबी रोडमा पुगे भन्ने कुरा गरौं!
यी केटी बीएससी स्नातक हुन् रविना (नाम परिर्वतन) बीएससी ग्रेजुएट छिन्, अङ्ग्रेजी पनि बोल्न र पढ्न सक्छिन् । सात वर्षअघि कर्नाटकमा एक व्यक्ति भेटे र रविनालाई दिल्लीमा जागिर दिने वाचा गरे। कामको लागि दिल्ली आउन राजी भइन् ।
तर दिल्ली आएपछि यी व्यक्तिको बोलि फेरियो । यी व्यक्तिले दिल्लीको जीबी रोडको कोठा नम्बर ५० मा रविनालाई बेचेका थिए। रविना यहाँ बस्न चाहँदैनन् तर उनलाई ५० हजारमा किनिएको थियो ।
रविनालाई ५० हजार पूरा गर्न चार वर्ष लाग्यो । चार वर्षपछि उनले रवि (नाम परिर्वतन) लाई भेटिन र उनीसँग लिभ इन रिलेसनसिपमा बस्न थालिन् । रविनाले रविनालाई यहाँबाट निकालेर कसैले अरु काम गराइदिने वाचा गरेका थिए ।
रविनाले जीबी रोडको लेन छोडे पनि रविको जुवा र म’दि’रा’को लतले गर्दा उनी फेरि त्यहाँ जानुपरेको थियो । रविना फेरि जीबी रोडमा जान थालिन् र जति पैसा पाउँथिइन्, रविले सबै पैसा खोसिन् ।
यति मात्र होइन रविनाको एउटा बच्चा पनि थियो । रविले रविनासँग कु’ट’पि’ट गर्ने, पैसा पनि खोसेका थिए । यो लामो समय सम्म चल्यो। केही समयपछि रविनाले उक्त बच्चालाई कर्नाटकस्थित आफ्नो घर पठाइन् ।
तीन वर्षपछि रविनाले रविसँग अलग हुने निर्णय गरिन् । तर रवि यसका लागि तयार थिएनन् । रविना यहाँबाट छोडेर नयाँ जीवन सुरु गर्न चाहन्थिन् । उनले एकपटक भाग्न खोजिन तर रवि उसको पछिपछि आएर कपाल समातेर उनलाई पछाडि ता’न्न थाले ।
एक दिन रविनालाई दिल्ली महिला आयोगको महिला हेल्पलाइनको बारेमा थाहा भयो। रविनाले हेल्पलाइन १८१ मा फोन गरिन् । दिल्ली महिला आयोगकी अध्यक्ष स्वातीको निर्देशनमा रविनालाई आयोगमा पठाइएको थियो । रविनाले आयोगलाई सम्पूर्ण कुरा सुनाइन् ।
घटना सुनेपछि आयोगले प्रहरी बोलाएर रविलाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीका अनुसार रविविरुद्ध मुद्दा चलिरहेको छ । अब रविनाको जीवन फेरिएको छ । आयोगले महिलालाई हरसम्भव सहयोग गर्ने बताएको छ । अब उनले आफ्नो नयाँ जीवन सुरु गर्नेछिन्, उनलाई कर्नाटक पठाइनेछ र छोरासँग नयाँ जीवन सुरु गर्नेछिन् ।